Iindaba -Uyigcina njani i-raincoat
iimpahla ezilahlwayo zemvula ze-PE
Ingubo yemvula ye-PE
Ingubo yemvula yePV
Poncoh yemvula ye-PVC
Ingubo yemvula ye-PVC
I-PE poncho kwibhola
iimpahla eziprintiweyo zemvula
Uyigcina njani i-raincoat
1. Idyasi yetape
Ukuba ibhatyi yakho yemvula yingubo yemvula enerabha, kufuneka ubeke iimpahla esele zisetyenzisiwe kwindawo epholileyo nenomoya emva nje kokusetyenziswa, kwaye yome idyasi. Ukuba kukho ukungcola kwibhokisi yakho yemvula, ungayibeka ibhatyi yakho yemvula kwitafile ethe tyaba, kwaye ukhuhle ngobunono ngebrashi ethambileyo efakwe emanzini acocekileyo ukuhlamba ukungcola okukuyo. Khumbula i-raincoat eqhotyoshelweyo Ayinakuthanjiswa ngezandla, kungasathethwa ke ngayo elangeni, kwaye ayinakutshiswa ngomlilo, kwaye ayinakucocwa ngezo sepha zealkali. Injongo yoku kukuphepha ukuguga kwe-raincoat. Okanye ube krwada.
Iteyiphu enemvula engenanto ayinakudityaniswa neoyile, kwaye kufuneka ibekwe kakuhle xa uyigcina. Musa ukubeka izinto ezinzima kwi-raincoat, kwaye ungayifaki nezinto ezitshisayo ukukhusela ukuba ungagxininiswa kwi-raincoat. Iifolds, okanye iintanda. Beka ezinye iibholiti zebhokisi yebhokisi kwibhokisi yemvula yerabha ukukhusela i-raincoat ekuncamatheni.
2. Idyasi eyina ilaphu engangenisi mvula
Ukuba ibhatyi yakho yemvula yingubo yemvula, xa idyasi imanzi ngenxa yemvula, awunakho ukusebenzisa izandla zakho okanye umnqwazi woboya ukubetha amanzi emvula kwirobhothi, kuba ngokwenza njalo kungonakalisa ukungasebenzi kwamanzi kweentsinga ezikwi-raincoat.
Iidyasi azilungelanga ukuhlanjwa rhoqo. Ukuba uyayihlamba rhoqo, kungenzeka ukuba ukusebenza kwe-raincoat kungangeni manzi. Ukuba ucinga ukuba ibhatyi yakho yemvula imdaka kakhulu, unokuyithambisa ngobunono irotcoat ngamanzi acocekileyo, emva koko wome idyokhwe yemvula ehlanjiweyo, kwaye uyixhome ukuze yome. Xa i-raincoat yomile ngokupheleleyo, thatha i-iron yitshise nje. Ukuba uza kuyibeka phantsi ibhatyi, kufuneka uyeke iimpahla zome phambi kokuba uzisonge. Oku kukuthintela ukusabela kweekhemikhali kwento ene-wax kwi-raincoat ngenxa yomswakama, oya kuthi uyenze isikhutha semvula.
3. Imvula yeplastiki yefilimu
Ukuba ibhatyi yakho yemvula yingubo yeplastiki enemvula, xa idyokhwe imanzi, kufuneka usule ngoko nangoko amanzi kwi-raincoat ngelaphu elomileyo, okanye uthathe i-raincoat uyise kwindawo epholileyo neyomileyo uyomise.
Iiplastikhi zemvula zeplastikhi azinakubekwa elangeni, kungasathethwa ke ngokubhakwa emlilweni. Ukuba ibhatyi yakho yemvula ishwabene kwaye ayinaku-ayina ngentsimbi, ungayifaka imvula emanzini afudumeleyo ngama-70 ukuya kuma-80 degrees ngomzuzu omnye, emva koko uyikhuphe uyibeke kwitafile ethe tyaba. Sebenzisa ukutyhila imvula ngokuthe tyaba ngezandla zakho. Sukuyitsala nzima i-raincoat nzima ukunqanda ukuvela kwe-raincoat. Ukuba isinxibo semvula seplastikhi sisetyenziswa ixesha elide, kulula ukusinciphisa okanye ukuqhekeka. Ukuba iinyembezi ezikwi-raincoat ayikho nkulu kakhulu, unokukhetha ukuzilungisa ngokwakho.
Indlela yokulungisa yile: beka intwana encinci yefilimu apho idyasi yemvula ikrazukile, emva koko ubeke iqatha leselophane ngaphezulu kwefilimu. Emva koko sebenzisa isinyithi sombane ukuyilayita ngokukhawuleza ukuze ifilimu inamathele kuvulo olukrazukileyo ukugqibezela ukulungiswa. Xa silungisa iingubo zemvula, kufuneka sikhumbule into enye: Iibhokhwe azikwazi ukuthungwa ngeenaliti. Ngaphandle koko, inokubangela iingxaki ezinkulu kwi-raincoat.
Ixesha Post: Dec-08-2020
Sizabalazela ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni. Ulwazi Cela, Isampulu & Quote, Qhagamshelana nathi!